Afrika, 19 June 2019 page 1
Arbaco 19 June 2019
Waxaa maanta mar kale dib u billowday isu socodka gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya magaalooyinka Mandhera iyo Nairobi kuwaas oo shalay ay dowladda Kenya u hakisay sababo amni la xiriira.
ONLF oo ka hadashay rabshado ka dhacay Wardheer
Jabahadda ONLF ayaa war qoraal ah ka soo saartay banaanbaxyo rabshado watay oo maalmihii la soo dhaafayay ka dhacayay magaalada Wardheer ee gobolka Doolo ee dalka Ethiopia.
Abiy Ahmed oo dhex-dhexaadin ka wada Khartoum
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa maanta gaaray magaalada Khartoum ee caasimada dalka Sudan, si uu u dhex-dhaxaadiyo madaxda militariga dalkaas xukuma iyo hogaamiyayaasha dibad-baxayaasha.
Abiy Ahmed oo dhex-dhexaadinaya dhinacyada Sudan
Ra’iisul wasaaraha Ethiopia, Abiy Ahmed ayaa jimcaha booqan doona magaalada Khartoum si uu u dhex-daadiyo hogaamiyayaasha milatariga haya talada dalka Sudan iyo isbahaysiga kooxaha dibad-baxayaasha, sida ay sheegeen ilo-wareedyo ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Khartoum.
Dibad-baxayaasha Sudan oo diiday wada-hadal
Hogaamiyayaasha banaanbaxyada dalka Sudan ayaa diiday soo jeedinta ah inay wada-hadal la galaan jeneraalada militariga, ayaga oo baaqaas ugu yeeray mid aan daacad laga ahayn, xilli ciidamada ammaanka ay sii wadaan beegsidooga ka dhanka ah dibad-baxayaasha oo toddobaadkan ay ku dhinteen 100 qof.